केकी अधिकारीले किन गरिन् केश मुण्डन? केश मुण्डन गर्नु पर्ने के थियो त्यस्तो कारण ? – ramechhapkhabar.com
केकी अधिकारीले किन गरिन् केश मुण्डन? केश मुण्डन गर्नु पर्ने के थियो त्यस्तो कारण ?
काठमाडौं। नायिका केकी अधिकारीले केश मुण्डन गरेकी छिन्। सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेका तस्बिरमा उनले केश मुण्डन गरेको देखिएको हो। उनले आफ्नो नयाँ चलचित्रका लागि केश मुण्डन गरेकी हुन्।
उनले नयाँ चलचित्रका लागि केश मुण्डन गरेकी हुन्। उक्त चलचित्रमा उनी र गौरव पहारी प्रमुख भूमिकामा देखिनेछन्। कपाल मुण्डन गरेपछि उनले शुरुमा निकै गाह्रो भएको प्रतिक्रिया दिएकी छिन्। उनले इन्स्टाग्राम स्टोरीमा कपाल मुण्डन गरेका तस्बिर सेयर गर्दै ‘परिवर्तन नै सुन्दर, मुण्डन नै सुन्दर’ भन्दै क्याप्सन लेखेकी छिन्।
कपाल मुण्डन गर्दा शुरुमा उनी रोएकी थिइन्। पछि विस्तारै सहज महशुस भएको उनको प्रतिक्रिया छ। फिल्मको कथाले मागेका कारण केश मुण्डन गरेको उनको भनाइ छ। सुलक्षण भारतीको निर्देशनमा बन्न लागेको उक्त चलचित्रमा केकीका पिता बद्री अधिकारी निर्माता र विशाल भण्डारी कार्यकारी निर्माता छन्।
महिलाकेन्द्रित उक्त चलचित्रको छायांकन बैशाखबाट हुनेछ। त्यसका लागि केकीले एक महिनाअगाडि नै केश मुण्डन गरेकी हुन्। यसअघि उनले बोक्सीको घरको छायांकन सकाएकी छिन्। उक्त चलचित्रको छायांकन सकाएर केश मुपण्डन गरेको केकीको भनाइ छ। यसअघि चलचित्र ‘प्रेमलीला’का लागि दीपाशिखा खड्का, ‘जाइरा’का लागि नम्रता श्रेष्ठ, ‘आमा’का लागि सुरक्षा पन्तले पनि आफ्नो चरित्रलाई जीवन्त बनाउन केश मुण्डन गरेका थिए।
महिलाका लागि सबैभन्दा प्रिय मानिएको कपाल नै मुण्डन गर्दा साह्रै पीडा हुने गरेको उनीहरूको प्रतिक्रिया छ।
कलाकारको मुहारमा खुसी फर्किँदै
१ वर्षभन्दा लामो समय घरभित्रै बिताएका गायक प्रकाश सपुत पछिल्लो एक महिना मेला महोत्सवमा व्यस्त देखिए । प्रकाशले यो एक महिनामा पोखरा, झापा, सिन्धुली, पर्वतलगायतका मेला महोत्सवमा सहभागिता जनाए । सपुत फागुनको अन्त्यमा ‘अछाम महोत्सव’मा थिए ।
गायक दुर्गेश थापाको पनि फागुन महिनाको सेड्युल निक्कै व्यस्त देखियो । उनी फागुन महिनामा झण्डै १५ मेला महोत्सवमा सहभागी भए । उनले अछाम महोत्सवमा पाएको सबै पारिश्रमिक बाँकेको नरैनापुरमा आगलागीमा परेका परिवारलाई राहत वितरणमा खर्चिए ।
गायक हेमन्त शर्माको पनि मेला महोत्सव सुरु भएसँगै दैनिकी फेरिएको छ । गत साता मात्रै नयाँ गीत सार्वजनिक गरेका शर्मा पनि व्यस्त देखिएका छन् । उनी पछिल्लो पटक भैरहवा महोत्सवमा सहभागी भए ।
कलाकारहरुले मेला महोत्सवको क्रम बढेसँगै खुसी मिलेको बताएका छन् । उनीहरुले पहिले झैं व्यस्त दैनिकी नभए पनि एक वर्षपछि पुरानै लयमा दैनिकी फर्किन लाग्दा राहत मिलेको बताएका छन् ।
गायक प्रकाश सपुतले त कोरोना महामारीपछि यति छिट्टै पुरानै लयको दैनिकीमा फर्किन पाइएला भनेर सोचेकै थिएनन् । उनले आफ्नो पहिलो रोजाइमा स्टेज कार्यक्रम नै पर्ने बताएका छन् । स्टेज कार्यक्रममा दर्शकसँग प्रत्यक्ष साक्षात्कार गर्न पाइने भएकाले पनि स्टेज कार्यक्रम आफ्नो प्राथमिकतामा पर्ने सपुतले सुनाए ।
उनले भने, ‘अभिनयलगायत अन्य विधाका काममा लागिरहँदा पनि मेरो ध्यान बढी मञ्चीय कार्यक्रमतिर हुन्छ ।’ मेला-महोत्सवमा दर्शकको सहभागिता देख्दा प्रकाशलाई कोरोना अझै छ र ? भन्नेजस्तो लाग्छ ।
कोरोना महामारीपछि यात्रा प्रतिबन्धका कारण देशविदेशका साङ्गीतिक कार्यक्रम रद्द भएपछि कलाकार मारमा परेका थिए । गायक हेमन्त शर्माले एक वर्षसम्म घरभित्रै थुनिएर बस्दाको समय निक्कै पट्यारलाग्दो भएको बताए । सुरुका केही दिन सहजै बिते पनि लामो समय गुजार्न भने निक्कै कष्ट भएको सुनाए । त्यसैले बन्दाबन्दीको समयमा पनि उनी नयाँ गीत बनाउन तथा रेकर्ड गर्नमै व्यस्त देखिए ।
बिस्तारै मनोरञ्जन क्षेत्रले गति लिएसँगै छिट्टै कोरोना महामारी पूर्णरूपमा थामिएर स्थिति सहज हुनेमा कलाकारहरु आशावादी देखिएका छन् । यो समय मेला महोत्सवबाटै आम्दानी गरेर जीविकोपार्जन गरिरहेका कयौं कलाकारको रोजीरोटी नै खोसिने अवस्था सिर्जना भएको थियो । अंग्रेजी नयाँ वर्षका कार्यक्रम सकिने क्रम र नेपाली नयाँ वर्षका मेला महोत्सवका सेड्युल बन्ने चरणमा सुरु भएको कोरोनाका कारण थुप्रै कलाकारका देश तथा विदेशका कार्यक्रम रद्द भएका थिए ।
पुनः कलाकारको जीवनले गति लिएको भन्दै दुर्गेश थापाले खुसी व्यक्त गरे । स्टेज कार्यक्रमबाट राम्रै कमाइ गर्ने थापाले एक वर्षसम्म आम्दानीको बाटो बन्द हुँदा आफू जस्तै धेरै कलाकारको जीवन समस्यामा परेको बताए । उनले भने, ‘बन्दाबन्दीपछि ४० भन्दाबढी कार्यक्रममा प्रस्तुति दिएँ, विस्तारै व्यस्तता बढ्दैछ, खुसी छु ।’
सिजनेवल गीत गाएर सधैं चर्चा आउने दुर्गेश युट्युबबाट पनि राम्रै कमाइ गर्ने कलाकारमा पर्छन् । पछिल्लो पटक शिवरात्रि लक्षित उनको गीत ‘सलाई छ सलाई’ युट्युबको ट्रेन्डिङ दोस्रो नम्बरमा आइपुगेको थियो । युट्युबबाट कमाइ भए पनि स्टेज कार्यक्रमबाट कलाकारलाई व्यावसायिक फाइदा बढी हुने दुर्गेश बताउँछन् ।
गायिका ज्योति मगर पनि कोरोनापछि लय समातेको सांगीतिक बजार देखेर खुसी छन् । मेला महोत्सवमा सबैभन्दा धेरै चल्ने कलाकार ज्योतिले कोरोना कालमा दर्शकलाई धेरै नै सम्झना गरेको बताएकी छन् । मेला महोत्सव सुरु भएसँगै ज्योतिको दैनिकी पनि निक्कै व्यस्त बनेको छ । उनले आफ्नो दैनिकी झनै व्यस्त हुँदै जाने अपेक्षा लिएकी छन् । ज्योतिले कोरोनाका कारण रोकिएका केही गीत-संगीतको कामलाई अगाडि बढाउने बताएकी छन् ।
कोरोनाका कारण एक वर्षको समय गाउँमै बिताएका लोक गायक विष्णु खत्रीले बन्दाबन्दीमा सिर्जना गरेका गीत रेकर्डिङ थालेका छन् । उनले यही समयमा सिर्जना गरेका ‘महिला हिंसा’, ‘अस्पताल’लगायतका केही गीत सार्वजनिक नै भइसकेका छन् । कोरोनाको मारमा परेका कला क्षेत्रले लय समातेसँगै आफूमा आशा जागेको खत्रीले बताए । लामो समय बन्द रहेको कला क्षेत्र, विशेष गरी मेला महोत्सव सुरु भएसँगै सम्पूर्ण कलाकार उत्साहित भएका छन् ।